Si kasta oo ay u soo kabtaan Photos ka Camera Nikon
> Resource > Camera > si kasta oo ay u soo kabtaan Photos ka Camera Nikon
Kamaradaha Nikon ayaa caan ah oo sannado badan. Xirfadda fiican, tayo sare leh, iyo naafada oo dhisme ah soo jiidato tiro badan oo ah dadka. Fiiri hadda Nikon D90, users yihiin kaabayaasha dhaqaale la saamaynta ay image aan caadi ahayn. Laakiin weli waxaa laga yaabaa inaan la kulmo khasaaro image sababahan soo socda: si qalad ah la tirtiro, formatting, weerar virus, awood aan la filayn off, iyo sababo kale sida incompatibility ee kaarka. Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado sawiro ka camera Nikon?
Dhab ahaantii waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan si ay u soo kabsadaan sawiro. Tusaale ahaan, weydiinaya saaxiib ku wareegsan, laakiin waxaa laga yaabaa in ay u dayacan faahfaahin qaar ka mid ah; doonayo inuu dib u soo kabashada takhasus ama hay'adaha sawir, laakiin in uu noqon doono kharashka yar. Halkan ka mid ah hab xirfadeed oo la isku halayn karo waa Nikon software kabashada sawir. Ka dib markii ay sawiro ka lumeen, xogta laftiisa aan la tirtiray, kaliya meesha ka photos lumay ay ku kaydsan hadda calaamadeeyay boos lacag la'aan ah sida faylasha kale oo cusub in la qoro. Software kabashada Photo iskaan kara meelahaas oo soo kabsadaan ka photos lumay. Halkan waxa ku jira 3 talooyin muhiim ah loo baahan yahay in fiiro gaar ah ka hor inta fulinaya soo kabashada sawir Nikon.
Sidee inuu ka soo kabsado photos lumay ka kamaradaha Nikon
Hel kabashada xirfadle Nikon sawir hore: Wondershare Photo Recovery (la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP) ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
Download version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo hadda. Ma dooran version saxda ah ee nidaamka kombiyuutarka aad.
Wondershare Photo Recovery Waa software kabashada sawir lagu kalsoonaan karo oo si fudud u soo kaban karto sawiro ka camera kasta oo leh tayo fiican. No xirfadaha loo baahan yahay wax soo kabashada. Awoodda kabashada Xoog kaa caawinaysaa in aad soo kabsado images lumay ka xaaladaha guud ee khasaaraha image.
Kaliya 3 talaabooyin fudud si ay u qabtaan soo kabashada sawirka
1. Isku camera ama kaadhka xusuusta si aad u computer, abuurtaan barnaamijka oo "Ku bilow" aad soo kabashada camera sawir Nikon.
2. Dooro camera Nikon in iskaan.
3. Kulanka Xiisaha Leh photos recoverable ceshan iyaga.
Video tutorial ah Nikon kabashada camera sawir
3 talooyin muhiim ah waa in maskaxda lagu hayaa ka hor fulinaya kabashada sawirka
1. Iska ilaali overwriting xogta: Ha saarin images dheeraad ah ama macluumaad kale ee meel ka mid ah halkaas oo sanamyada lumay ay ku kaydsan, haddii kale meel hore oo lacag la'aan ah lagu overwritten doonaa dad kale, taas oo ka dhigaysa Nikon kabashada sawir adag xitaa la software kabashada xirfadeed.
Marka aad ka heli sawiro aad la soo kabsaday yaabaa, kuma badbaadin in meel ka mid ah halkaas oo sanamyada lumay ay ku kaydsan. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad soo kabsado sawiro ka H xijaab :, waa inaad sheeg gal ah si loo badbaadiyo sawirrada ee xijaab E: ama xijaab kale, ma H xijaab :.
2. sidoo Hayso qalab kaydinta: Ka dhig si fiican camera ama kaarka. Guud ahaan markii qalab kaydinta la kulmay dhaawac macquul ah sida reformatting ama tirtirka ula kac ahayn, xogta lumay waa recoverable. Laakiin marka la kulmay dhaawac jireed sida marka heerkulka sare, kala go'in, arrinkaas, ama dhaawac biyo, xogta uu noqon doono mid aad u badan tahay unrecoverable.
3. Dooro Nikon software ku haboon kabashada sawir: Aniga, software ku haboon waa in ay leeyihiin, kuwaas oo muuqaalada: xirfadeed iyo awood function soo kabashada, noqon ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, waafaqid sare iyo qiimaha tartan rasmi ah.